प्रेममा धोका पाएपछि यी नायिकाले गरिन आ’त्मह’त्या – Sandes Post
मुख्य पृष्ठ /News/प्रेममा धोका पाएपछि यी नायिकाले गरिन आ’त्मह’त्या
प्रेममा धोका पाएपछि यी नायिकाले गरिन आ’त्मह’त्या
मुम्बई : कन्नड नायिका चन्दना गोडाले वि’ष खा’एर आ’त्मह’त्या गरेकी छन्। २९ वर्षीया चन्दनाले क’र्नाटकको बेंगलुरुस्थित आफ्नै घरमा आ’त्मह’त्या गरेकी हुन्। प्रेमीबाट धोका पाएपछि चन्दनाले आ’त्मह’त्या गरेकी हुन्। आ’त्मह’त्या गर्नुअघि उनले एउटा भिडियो रेकर्ड गरेकी थिइन् जसमा उनले प्रेमीमाथि धो’का दिएको आ’रोप लगाएकी छन्।
आ’त्मह’त्या गर्नुअघि उनले सो भिडियो आफ्ना प्रेमी र परिवारका सदस्यलाई पनि पठाएकी थिइन्। चन्दनाको भिडियो पाएलगत्तै परिवारले नायिकाका छिमेकीलाई जानकारी दिएर यथार्थ बुझ्न भनेको थियो।चन्दनालाई छिमेकीले अस्पताल पुर्‍याएलगत्तै चिकित्सकले उनलाई मृ’त घो’षित गरे। समाचारअनुसार चन्दना दिनेश नामका एक युवकसँग केही वर्षदेखि अफेयरमा थिइन्।
प्रेमीसँग विवाहको कुरा नि’काल्दा सधैं केही न केही ब’हाना बनाएर टा’र्ने गरेका थिए ।प्रेमीको व्यवहारले उनी त’नावमा थिइन्। आ’त्मह’त्या गर्नुअघिको उनको भिडियोमा नायिका चन्दनाले दिनेशको अर्की महिलासँग पनि अ’फेयर भएको बताएकी छन्। दिनेशले दिएको धो’का स’हन नसकेर आफूले ज्यान दिएको बताएकी छन्। चन्दनाको आ’त्मह’त्यापछि उनका प्रेमी फ’रार छन्।
कतार प्रहरी रोजगारको बाटो खुल्यो !! यस्ता मान्छेले एप्लाई गर्न पाउछन !
बहराइनमा ३ जना नेपालीलाई भेटियो कोरोना भाइरसको सं,क्रमण